बुद्धिजीवीहरूमाथि लागेको आरोपमा प्रवक्ताको नो कमेन्ट्‌स
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाभित्र सल्किएको अन्तरद्वन्द्वलाई मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले ठाडै नकारेका छन्‌। तिनको भनाइ अनुसार मोर्चाभित्र कुनै अन्तरद्वन्द्व छैन। तर जब हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट मोर्चालाई हानि गर्ने उद्देश्यमा आउनुमा मोर्चाभित्र कै बुद्धिजीवीहरू दायी रहेको कुरा मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले नै बैठकहरूमा गरेको सम्बन्धमा तिनले ‘नो कमेन्ट्‌स’ भने। सफाईमा तिनले यति मात्र भने, हाइपावर कमिटीको त्यस्तो रिपोर्ट आउँछ भनेर हाइपावर कमिटीका सदस्यहरूलाई थाहा नै थिएन। जब थाहा भयो तब यसको विरोध गर्ने काम गरेका छौं। त्यस उता म केही भन्न चहान्न। तिनको यो भनाईले हाइपावर कमिटीका सदस्यहरूले 11 महिना के हेरिरहेका थिए त? भन्ने प्रश्न उठाएको छ। पॉंचवटा मौजाको रिपोर्ट बुझाउन यो कमिटीलाई 11 महिना लाग्यो। तर कुनै पनि दिन यसको ‘रिपोर्ट बनाउनमा हाम्रो कुनै भूमिका छैन’ भनेर हाइपावर कमिटीका मोर्चाका प्रतिनिधिहरूले बोलेनन्‌। किन? जब रिपोर्ट नकरात्मक आयो तब मात्र ‘हाम्रो कुनै भूमिका छैन’ भन्नुको के अर्थ निस्कन्छ? यसको जवाब डा. हर्कबहादुर छेत्रीसित पनि छैन। यसै कारण तिनले हतार हतार ‘नो कमेन्ट्‌स’ भनेर कुरा टारे। मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले दुइवटा बैठकमा हाइपावर कमिटीका मोर्चाका प्रतिनिधिहरूप्रति सोझै शंसय व्यक्त नगरेपनि संकेतमा शंसय व्यक्त गरेका थिए। जसबारे डा. हर्कबहादुर छेत्रीसित कुनै भनाइ नरहेको आज कालेबुङमा पत्रकारहरूलाई बताएका छन्‌। यद्धपि मोर्चाभित्रका बुद्धिजीवीहरूमाथि बारम्बार विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेको छ। जीटीए सम्झौता हस्ताक्षर गर्दा हतार गरेको अनि भविष्यमा यो सम्झौताले गर्ने असुविधाहरू केही नहेरेको आरोप यसै पनि यी बद्धिजीवीहरूमाथि छ। त्यहीँमाथि हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट निस्केपछि ‘हाम्रो हात छैन’ भनेर पत्यार गर्न नसक्ने टप्पणी विशेष गरेर मोर्चा महासचिव रोशन गिरी अनि प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीबाट आउनुलाई पनि शंकाको दृष्टिले मोर्चाले नै हेरेको छ। 11 महिना हात बॉंधेर बस्नु अनि अहिले श्यामल सेनले ‘छक्यायो’ भन्ने बुद्धिजीवीहरूको बुद्धित्ता स्पष्ट भएपछि मोर्चाभित्र नै अन्तरकलह चलेको मोर्चाका समर्थकहरूमात्र होइन मोर्चा बाहिरकाहरूले पनि छर्लङ्ग देखे पनि प्रवक्ता डा. छेत्रीले मोर्चाभित्र कुनै झमेला नरहेको बताए। तर बुद्धिजीवीहरूलाई मोर्चाभित्रबाटै नै लागेको आरोपबारे भने नो कमेन्ट्‌स भनेर मोर्चाभित्र कलह रहेको स्पष्ट पारेका छन्‌। यसै पनि डुवर्सका सममर्थकहरुले मोर्चाको कलह मिडियामा सार्वजनिक गर्दै आइरहेका छन्‌।
घोषित कार्यक्रम के हुन्छ?
मोर्चाका प्रतिनिधिहरू लगायतका हाइपावर कमिटीले डुवर्सको दुइवटा र तराई तीनवटा मौजा दिएर मोर्चालाई ह्युमुलेशन गरेको आरोपमा मोर्चाले विभिन्न कार्यक्रमहरूको घोषणा गरेको छ। त्यसलाई फिर्ता लिइएको छैन। यस्तोमा फेरि मोर्चाले 24 जूनमा थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने मोर्चा महासचिव रोशन गिरीले बताएका छन्‌। के मोर्चाले अघिल्ला घोषित कार्यक्रमहरू फिर्ता लिन्छ? के मोर्चाका कार्यक्रमहरू अघिजस्तै सबै फिर्ता लिएर जीटीएको चुनाउमा जान्छ? भन्ने सम्बन्धमा मोर्चाले देखाएको राजनैतिक व्यवहारलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न अडकलबाजी भइरहेको छ। मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले कोठामा बसेर अडकलबाजी गर्नुु सजिलो रहेको तर कुनै पनि निर्णय गर्नु मोर्चालाई कठिन रहेको भन्दै तिनले ढिलो होस्‌ छोरा होस्‌ भनेर नै झट्ट निर्णय नगरेको बताएका छन्‌। तिनले भने अनुसार मोर्चा 24 मा यस्तो निर्णय गर्न चहान्छ, जुन निर्णयलाई फेरि फिर्ता गर्न नपरोस्‌। तिनले भने, आलोचकहरूले विभिन्न अडकलबाजी गर्छन्‌, तर हामी यस्तो निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेका छौं कि त्यसैमा अडिग रहनसकौं। यसैको तयारी चलिरहेकोले मोर्चाले झट्ट निर्णय गर्न नसकेको हो। तिनले कुराबाट कस्तो आशय निकाल्न सकिन्छ भने नयॉं निर्णयले पुरानो निर्णयलाई खारेज गर्नसक्छ। अथवा मोर्चाले विभिन्न कार्यक्रमहरूमध्ये जीटीए चुनाउ नमान्ने, 17 जुलाईमा जीटीए सम्झौता जलाउने अनि 27 जुलाईमा विधायकहरूले राजिनामा दिने घोषणा गरिसकेको छ। यो घोषणालाई फिर्ता लिएर 24 मा यस्तो निर्णय मोर्चा गर्न चहान्छ कि त्यसलाई पनि फिर्ता गर्न नपरोस्‌।
अगिड निर्णयको तयारीमा रहेको मोर्चाले अघिल्ला घोषित कार्यक्रमहरू ममता सरकारले हाइपावर कमिटीको रिपोर्टमाथि फ्याक्ट फाइण्डिङ कमिटी बसाउने भएकोले फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। 24 सम्ममा घोषित पूर्व कार्यक्रमहरू फिर्ता लिइने हो कि नलिने हो वा मोर्चा चुनाउमा जाने हो कि होइन स्पष्ट हुने संकेत प्रवक्ता छेत्रीले दिएका छन्‌।
घिसिङको मुद्दाबाट मोर्चा चेपारोमा छैन
सुबास घिसिङले जीटीएको वैद्धतामाथि सवाल उठाउँदै कोलकाता उच्चन्यायलयमा दर्ता गरेक याचिकालाई न्यायलयले मान्य गर्दै केन्द्र, राज्य र मोर्चालाई हलफनामा बुझाउने निर्देश दिइसकेको छ। डा. छेत्रीले कानूनबारे सुबास घिसिङ जान्ने कि सरकारको कानून विभाग? भन्ने प्रश्न उठाएका छन्‌। तिनले भने, जीटीएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अघि यो सम्झौतापत्र भारत सरकारको कानून विभागमा6महिना बस्यो। यसको अर्थ के हो भने जीटीएमा कहॉंकहॉं कानूनी अडचन छ भनेर हेर्नु हो। अड्‌चनहरू केलाइएपछि नै यो सम्झौतामा आएको हो। यसकारण घिसिङको मुद्दा दर्ताले मोर्चा कुनै चेपारोमा छैन। ड्राफ्ट बनाउने राज्य र केन्द्र सरकार हो, यसकारण कानूनीरुपको कुनै पनि विवादको जवाबदेही पनि राज्य र केन्द्र नै हो।
डा. छेत्रीले सजिलै पन्सिने कुरा गरेपनि मोर्चा पनि सम्झौताकर्ताकोरुपमा यसको जवाबदेही रहेको छ। यद्धपि विधायक छेत्रीले घिसिङको बौद्धिकतामाथि प्रश्न चिह्न खडा गर्दै भने, घिसिङ ठीक हो भने सरकारको कानून विभाग लाटाको धोती हो। लाटाको धोती हो भने देश कसरी चल्दैछ? तिनले सुबास घिसिङको यो मुद्दालाई पनि ‘सेकेण्ड हेग भर्सन’ बताएका छन्‌। तिनले भने, भारत सरकारको कानून विभागले समस्या नदेख्नु र घिसिङले समस्या देख्नु ताज्जुबको कुरा छ। यो मुद्दासित मोर्चालाई लुतो न कनाई छ।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाभित्र फाटोको संकेत
अहिले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाभित्र साङ्गठानिक एकता अक्षुण्ण रहेपनि केन्द्रिय समितिमा व्यापकरुपमा फाटो बढ्‌दै गएको एक विश्वस्त सूत्रले बताएको छ।
यसको छनक दार्जीलिङको भा-तकभर मालिधुरामा भएको 10 जुनको बैठकमा पाइएको बताइएको छ। शुरुदेखि नै मोर्चाभित्र दुइवटा खेमा छर्लङ्ग देखिएको थियो। एकले जीटीए होइन छुट्टैराज्य भनिरहेको छ अनि अर्कोले जीटीए भनिरहेको छ। तर पार्टीका असुविधाहरूलाई ध्यानमा राख्दै पनि तराई र डुवर्स सहितको जीटीए स्वीकार गर्न सकिन्छ भन्ने मतमा बसेकाहरूले जब जीटीएमा तराई र डुवर्स नपस्ने स्पष्ट बुझे तबदेखि नै असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आइरहेका थिए। यो असन्तुष्ट जमातले शुरुदेखि नै जीटीएमा भएका भूलहरू पनि अनुभव गर्दै आइरहेको थियो। केन्द्रिय समितिमा बुद्धिजीवीहरू हाबी भएपछि नै मोर्चाको राजनैतिक उद्देश्य धमिलो हुनथालेको छ भने मुद्दाले अर्को दिशा पक्रिन थालेपछि मोर्चाभित्र रहेका इमान्दार र मुद्दाप्रति समर्पितहरू दलबाट बिस्तारै निस्कन थाले। पार्टीको उद्देश्य जब छुट्टै राज्य नै होइन भन्ने बुझ्नेहरूले पार्टीमा नै बसेर कमाउन सकिने भनेर नै समर्थन गरिराखेको पनि स्पष्ट छ। तर जीटीएमाथि मोर्चाले धेरै आशा राखेको भए पनि तराई र डुवर्सको सवालले धेरैवटा असुविधा निम्ताएपछि मोर्चाभित्र नै यसको विवाद बढ्‌न थालेको छ।6जूनमा जिमखानामा भएको बैठकमा डुवर्सका प्रतिनिधिहरूले विमल गुरूङलाई औंला उठाएर धोकेबाजको संज्ञा दिएपछि भने मोर्चा सॉंच्ची नै असुविधामा परेको छ।
मोर्चालाई जोन बारलादेखि त डर छैन तर डुवर्सका गोर्खा समर्थकहरूको नजरमा विमलको छबि पनि घिसिङकै जस्तो देखिन थालेपछि जीटीएलाई लिएर मोर्चा दोधारमा छ। विमल गुरूङले तराई र डुवर्सका समर्थकहरूलाई बुझाउने कोशिश गरेपनि जीटीएमा तराई डुवर्स अन्तरभुक्ति नहुनेभएपछि डुवर्सका प्रतिनिधिहरूले विमलको कुरालाई तर्कले जितेपछि विमल गुरूङ नै निःशब्द बनेका थिए। तरै पनि हाइपावर कमिटीको रिपोर्टसम्म पर्खिएर हेर्ने आश्वासन विमल गुरूङले दिएपछि तराई र डुवर्सका समर्थकहरूले तिनको बचनलाई कदर गरिदिएका थिए। हाइपावरको रिपोर्ट नकरात्मका आएपछि मोर्चाको असुविधा अझ बढ्यो। केन्द्रिय समितिका बुद्धिजीवीहरूले विमल गुरूङलाई यसको पनि समाधान निकाल्ने त बतायो तर न्यायधीश श्यामलको रिपोर्ट जॉंच्न उत्तर बङ्गाल विकास विभागका मनोज अग्रवालहरूकोे कमिटी बनाउने भएपछि जनतामा सन्देश राम्रो गएन। तर यो कमिटी बनिने भएपछि मोर्चाले राहतको सास भने फेरिरहेको छ। केही ढिलो होस्‌ तर जीटीए नै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा मोर्चाका महासचिव रोशन गिरी अनि प्रौड बुद्धिजीवी एलबी परियार रहेका छन्‌। यसको निम्ति सम्पूर्ण तालमेल सरकारसित मिलाउन भने विधायक डा. हर्कबहादुर छेेत्रीले बलियो भूमिका निर्वाह गरिरहेको सूत्रको दाबी छ। मोर्चाभित्रका बुद्धिजीवीहरूले विमल गुरूङलाई धेरैवटा चलाकी गरेको बुझ्न थालेपछि विमल गुरूङले तराई र डुवर्सबिना जीटीए सीटीए मारो गोली भनेकोले मोर्चाका केन्द्रिय बुद्धिजीवीहरू पनि ऐंठनमा परेका छन्‌। विमल गुरूङले राज्य सरकारसित हेमखेम राख्ने बुद्धिजीवीहरूलाई धेर सम्पर्क नराख्ने निर्देश दिए पनि विधायकहरू कोलकाता धाउन छोडेका छैनन्‌। यता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले रिभेरिफिकेशन कमिटी बसाउनुपर्छ भन्ने उपाय निकाल्ने वित्तिकै राज्य सरकारले वास्तविकता जॉंच समिति बनाउने कुरालाई तुरुन्तै स्वीकृति दिइन्‌। डा. छेत्रीको भनाई श्यामल सेन यही राज्यका प्रतिनिधि रहेकोले अबको कमिटी राज्य बाहिरका प्रतिनिहरूबाट राखिनुपर्छ भन्ने थियो तर मुख्यमन्त्रीसित यसको माग तिनले गरेनन्‌। फलस्वरुप मनोज अग्रवालहरूको कमिटी बसाइने भएको छ। भा-तकभर मालिधुरामा भएको बैठकमा मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले श्यामल सेनको रिपोटले धोका दिनुमा रोशन गिरी अनि एलबी परियारलाई दोष्याएको खबर छ। यस बैठकमा विमल गुरूङले रोशन गिरीले नै जीटीएमा हस्ताक्षर गर्न हतार गरेको अनि श्यामल सेनको रिपोर्ट मान्नुपर्छ भनेर हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भनेर कागजसमेत ल्याएको कुरा खुलाएको गोप्य सूत्रले बताएको छ। तर यसमा विमल गुरूङले हस्ताक्षर नगरेको अनि हस्ताक्षरकर्ताहरूमा रोशन गिरी र एलबी परियार रहेको पनि बताइएको छ। यसै बैठकमा रोशन गिरीलाई महासचिवको पद्बाट हटाउनुपर्छ भन्ने नाराबाजी पनि भएको सूत्रको दाबी छ। सूत्रको दाबी अनुसार यसै बैठकमा आशा गुरूङले राम्रो मान्छेहरू निकालेर पार्टीमा ढाडे विरालोहरू पसेको कुरा गरेकी थिइन्‌। यसै बैठकमा विमल गुरूङले विधायकहरूको पनि हाइकमान अर्कै रहेको संकेत गरेका थिए। यो बैठकबारे कुनै सूचना मिडियालाई दिइएन किन भने विमल गुरूङले नै मिडियामा कसैले पनि ब्रीफ नगर्ने निर्देश गरेको पनि सूत्रको भनाइ छ। यो घटनाले मोर्चाभित्र अविश्वासको वातावरण व्याप्त बनिसकेको स्पष्ट पारेको छ। आफ्नै बुद्धिजीवीहरुले विमल गुरूङलाई यो अवस्थामा पारेको कुरा विमल गुरूङ स्वंयले अनुभव गरिसकेकोले नै तिनले धेरैवटा कार्यक्रम घोषणा गरेको पनि बताइएको छ। जसमा विधायकहरूको राजिनामा अनि जीटीएको खेस्रा जलाउने कुरा प्रमुख छ। तिनको यो घषणा यथार्थमा बद्लियो भने मोर्चाका बुद्धिजीवीहरूको मनमा घन्टी बज्न शुरु हुनेछ। विमल गुरूङले स्पष्ट भनेका छन्‌, ममताले हॉंसीहॉंसी धोका दियो। अब जीटीए मान्दैनौं। धेरै जबरजस्ती गर्‍यो भने जङ्गल पस्छु। के संकेत पाइएको छ भने विमल गुरूङले आफ्ना बुद्धिजीवीहरूमाथि विश्वास गर्न छोडेका छन्‌। केन्द्रिय समितिमा राम्रो मेलमिलाप छैन। मेलमिलापको कारण जीटीए भर्सेस गोर्खाल्याण्ड नै रहेको थाहा लागेको छ। विमल गुरूङको एकल निर्णय र कार्यक्रमहरूको घोषणाले केन्द्रिय समितिका कतिपय सदस्यहरूलाई असुविधा पर्ने देखिएको छ। यसकारण उनीहरूलाई सरकारसित मिलेर मोर्चालाई दवाबमा पार्ने सरकारी पहल गराइमाग्ने अनि जीटीएको चुनाउ गर्ने विचार राखेको पनि सूत्रको दाबी छ। यसै कारण नै तृणमूलको पार्टी विस्तार यसमा डा. हर्कबहादुर छेत्रीको सहानुभूति प्रकाशमा आएको लख काटिएको छ। विमल गुरूङले यसको पनि आभाष पाएकोले नै बैठकहरूमा बारम्बार नै जबरजस्ती गरेमा जङ्गलपस्ने घोषणा गरिरहेका छन्‌। यसै कारण नै जबरजस्ती गरेमा कोही पनि बुद्दिजीवीहरूलाई जीटीए चुनाउमा खडा नगर्ने अनि लाटा लङ्गडोहरू उठाउने कुरा गरेर सरकारको पक्षमा काम गरिरहेका बुद्धिजीवीहरूलाई खबरदारी गरेको पनि सूत्रको भनाइ छ।
भेरिफिकेशन कमिटी बसाउनेः मोर्चा टोलीले मान्यो शर्त जुलाईमा जीटीए चुनाउ हुने निश्चित
कोलकाता, 16 जून,।
राइटर्सको दोस्रो तल्लामा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी अनि पहाडबाट गएको अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले प्रतिनिधित्व गरेको टोलीबीच भएको बैठकमा जुलाईमा चुनाउ गर्ने सम्बन्धमा सहमती भएको राज्य सरकारको सूत्रले बताएका छन्‌।
मोर्चाले तराई डुवर्सको मौजाबारे श्यामल सेनको कमिशनले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टलाई दुत्कार्ने अनि यसको निम्ति रिभेरिफिकेशन कमिटी बसाउने माग गरेपछि मुख्यमन्त्रीले मोर्चाको मागलाई स्वीकृति दिइन्‌। राज्य सरकारले मोर्चाको कुरा मान्दै तीन सदस्यीय भेरिफिकेशन कमिटी बसाउने भएको छ। तर ती सदस्यहरू सरकारले नै नियुक्त गर्नेछन्‌। मोर्चाले श्यामल सेन सरकारको मान्छे रहेकोले सरकारको पक्षमा रिपोर्ट दिएको आरोप लगाए पनि मुख्यमन्त्री ममता व्यनर्जीले भेरिफिकेशन कमिटीमा सरकारकै प्रतिनिधिहरू बस्ने भनेर दिएको सुझावलाई भने मोर्चाले स्वीकार गरेको छ। वैठकमा मोर्चालाई जुलाईमा जीटीएको चुनाउ हुने स्पष्ट पारिदिएको छ। यस सम्बन्धमा राज्य सरकारको गृह विभागबाट विज्ञप्ती पनि जारी गरिएको छ। जहॉं जुलाईमा जीटीएको चुनाउ हुने बताएको छ। आज नै जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जुलाईमा चुनाउ हुने भनेकोले मोर्चाले बैठकमा चुनाउ गर्ने सम्बन्धमा स्वीकृति दिएको स्पष्ट भएको छ। रोशन गिरीले बैठकपछि चुनाउ सम्बन्ध पत्रकारहरूलाई बताए अनुसार चुनाउ हुनु नहुनु विमल गुरूङको हातमा छ। यता दार्जीलिङ सूत्रले जनाए अनुसार जबसम्म भेरिफिकेशन कमिटीले मोर्चाले सर्वेक्षण गरेर बुझाएको रिपोर्टको आधारमा तराई र डुवर्सका क्षेत्रहरूको निरीक्षण हुँदैन अनि जीटीएमा पस्दैन तबसम्म जीटीएको चुनाउ नहुने कुरा विमल गुरूङले बताएका छन्‌। उता रोशन गिरीले विमल गुरूङलाई देखाएपछि पत्रकारहरूले विमल गुरूङसित प्रश्न गर्दा तिनले नरम व्यवहार देखाउँदै कार्यक्रमहरू घोषणा भइसकेको अनि चुनाउ पटक्क नमान्ने स्पष्ट पारेका छन्‌। तर कोलकाता सूत्रले बताए अनुसार मोर्चा दवाबमा छ। मोर्चा दवाबमा रहेको कुरा बुझाउनको निम्ति नै मोर्चाले फ्रण्टल अर्गनाइजेशनका प्रतिनिधिहरूलाई कोलकाता पठाएको थियो, मुख्यमन्त्रीको सुझावमा। ताकी मोर्चाको केन्द्रिय समितिलाई सधैँ चाप दिने तल्लो अर्गनाइजेशनले पनि पार्टीको बाध्यता राम्रोसित बुझ्न सकून्‌। गिरीले भने, बैठकमा श्यामल सेनको रिपोर्टलाई खारेज गर्ने माग गरियो। मौजाहरू सिफारिस गर्न अनि श्यामल सेनको रिपोर्टको आधारभूत वास्तविकताहरू खुट्याउन भेरिफिकेशन कमिटीको माग पनि गरियो। सरकारले मोर्चाको माग मानेको छ। तिनी चुनाउ सम्बन्धमा बारम्बारको प्रश्नमा पनि जीटीए चुनाउबारे खुलेर बोलेनन्‌। तराई डुवर्सका मानिसहरू आजको निर्णयले खुशी होला भन्ने प्रश्नको उत्तर दिएनन्‌। बैठकको निर्णय अनि मोर्चाको वर्ताव अनुसार मोर्चा आजको बैठकमा चुनाउ गराउने बाध्यतामा छ। जुन कमिटी बसाइएको छ, त्यसमा पनि सरकारी प्रतिनिधि हुने हुनाले मोर्चाले दाबी गरेको मौजा पस्न सक्ने छॉंटकॉंट छैन। यस्तोमा नै मोर्चा जीटीएको चुनाउमा जाने सुरसारमा छ। दार्जीलिङमा विमल गुरूङले यो कमिटीमा कुनै आशा नरहेको बताएका छन्‌। यता 27 जुलाईको दिन मोर्चाले जीटीएको खेस्रा जलाउने घोषणा गरेको छ भने अर्कोतिर आजको बैठकमा जीटीएको चुनाउ गर्ने सहमति दिएको छ। सरकारले कमिटी बसाउने भएपछि मोर्चा चुनाउ गर्ने पक्षमा सहमति दिन बाध्य परेको कोलकाता सूत्रको भनाइ छ। यता 17 जुलाईको दिन विधायकहरूले राजीनामा दिने घोषणा पनि छ। तर कोलकाता सूत्रले विधायक सूत्रबाट नै पाएको जानकारी अनुसार विधायकहरूले राजिनामा दिने सम्बन्धमा मोर्चाको केन्द्रिय कमिटीको बैठकमा चर्चा भएको छैन। यता मोर्चाले नगरपालिका पार्षदहरूको राजिनामा नगर्ने अथवा नगरापालिका आन्दोलनमा सहभागी नहुने बताएर घोषित कार्यक्रम फिर्ता गर्ने क्रम शुरु गरेको छ। जुन महिनाभित्रमा मोर्चाले घोषणा गरेको सबै कार्यक्रम फिर्ता भइसक्ने छॉंटकॉंट पनि आज कोलकातामा पाइएको कोलकाता सूत्रको बनाइ छ। यता राइटर्समा नै नागरिक मञ्चको व्यानरमा गएका पहाडका केही संस्थाका प्रतिनिधिहरूले कोलकाताका पत्रकारहरूलाई जीटीएको चुनाउ हुनुपर्छ अनि विकास हुनुपर्छ भन्ने माग मुख्यमन्त्रीसित गरेको बताइएको छ। कोलकाता सूत्रले थाहा पाए अनुसार कालेबुङबाट उदय कुमाइले प्रतिनिधित्व गरेको टोलीले आज मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीको निम्तोलाई स्वीकार गर्दै बैठक गरेको छ।
तृणमूल-लिगको डेड घण्टा बैठकः मदन तामङ हत्याराहरू पक्राउ गरे पहाडमा शान्ति फर्किने सम्बन्धमा कुराकानी
सिलगढी सर्किट हाउसमा उत्तरबङ्गाल उन्नयन मन्त्री गौतम देवले अखिल भारतीय गोर्खालिग नेतृत्वहरूसित डेड घण्टा बैठक गरे।
पहाडमा शान्तिको सूत्र खोज्न अनि गणतान्त्रिक बहालीमाथि बैठकमा बहस चल्यो। गौतम देवसित तृणमूल जिल्ला सचिव सुजित कुण्डु लगायक अन्य तीनजना नेताहरू पनि साथमा थिए भने लिगबाट अध्यक्ष भारती तामङ, महासचिव प्रताप खाती अनि केन्द्रिय सदस्य लक्ष्मण प्रधान र थेबा तामङको उपस्थिति रहेको थियो। गोर्खालिगको पक्षमा भारती तामङले पहाडमा शान्ति र गणतन्त्र बहालीको निम्ति मदन तामङ हत्याकाण्डसित जडित गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेताहरू विमल गुरूङ, रोशन गिरी लगायत अन्य केन्द्रिय नेताहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कुरा गौतम देवसित राखिन्‌। गौतम देवले मदन तामङ हत्याकाण्डबारे आफूहरूलाई सम्पूर्णरुपले अवगत रहेको जनाए। भारती तामङले सीबीआईले लिगलाई दिएको असुविधाबारे गौतम देवलाई अवगत गराउँदै राज्य सरकारले मदन तामङको हत्या सम्बन्धमा कुनै सहयोग नगरेको कुरा बताइन्‌। तिनले मुख्यमन्त्रीसित रहेको मदन तामङ हत्याकाण्डसित संलग्न मोर्चाका नेताहरूले हत्याको जाल बुन्दा गरेको फोन ट्यापिङको डिजिटल फाइल सीबीआईको हातमा दिने अपील पनि गरिन्‌। गौतम देवले यस सम्बन्धमा कोलकातामा मुख्यमन्त्रीसित 15 जूनको निम्ति बैठक गर्ने बताएका छन्‌। यता 16 जुनको दिन मुख्यमन्त्रीले मोर्चाका नेताहरूलाई कुराकानी गर्न बोलाएकी छन्‌। गौतम देवले लिग नेताहरूलाई 17 जुनको दिन फोन गरेर सम्पूर्ण कुरा बताउने आश्वासन दिएका छन्‌। लिगले गौतम देवलाई पहाडमा मदन तामङ हत्यासित संलग्न भगौडेहरू पुलिससित मिलेको अनि स्वतन्त्ररुपले घुमिरहेको कुरा पनि अवगत गराएको छ। यस सम्बन्धमा प्रताप खातीले बताए, आईसी थानामा बस्छन्‌ अनि उनीहरूको श्रीमती मोर्चाको नारी मोर्चामा कुद्‌छन्‌। ओसीको छोरा विद्यार्थी मोर्चामा खट्‌छन्‌। यस्ता प्रशासनिक अधिकारीहरूबाट न्यायको आशा गर्न सकिन्न। गौतम देवलाई पहाडको दागोपाप प्रशासक अनिल बर्मा, जो युकेबाट आफ्नो स्वास्नीलाई प्रताडना गरेको काण्डबाट खेदाइएको छ, जसले मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङलाई विकासको योजनाहरू बॉंड्‌न पठाउने, कुनै अधिकारीले होइन पहाडमा विमल गुरूङले सरकारी योजनाका शिलान्यास गर्ने, राशिन बॉंड्‌ने, सरकारी भवनमा जीएलपी राख्ने, जीएलपीलाई सैनिकको पोशाक लगाएर भित्रभित्रै विभिन्न किसिमका ट्रेनिङ दिने अनि यसो गर्नमा प्रशासकले सहयोग गर्ने गरेको कुरा पनि लिगले मन्त्रीलाई बताएको छ। उच्च न्यायलयले मदन तामङ, गिरी र कर्णल रमेश आले लगायत अन्यको बेल रिजेक्ट गरेको भए पनि उनीहरूलाई किन पक्राउ गरिएन? भन्ने प्रश्न पनि गौतम देवसित लिगका नेताहरूले गरेका छन्‌। पहाडका जिल्ला शासक, महकुमा शासक, विभिन्न कार्यालयका अधिकारीहरू, इञ्जिनियरहरूको कारण पहाडमा मोर्चाले व्यापक भ्रष्टचार गरेको पोल पनि लिगले खोलेको छ। यस्ता जम्मै अधिकारीहरूलाई पहाडबाट निकालेर स्वस्थ प्रशासनिक व्यवस्थाको निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि लिगले राखेको बताइएको छ। अर्कोतिर मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले पहाडमा शान्ति ल्याएको राष्ट्रिय गोषणा गरेपनि पहाड भने दिनोदिन अशान्ति रहेको अनि यसको जड मदन तामङका हत्याराहरू खुल्ला घुम्नुले भएको कुरा गर्दै हत्याको डरले नै मोर्चा विरुद्ध कुनै कुरा जनताले गर्न नसक्ने स्थिति रहेको पनि बताइएको छ। गौतम देवलाई लिगले पहाडमा शान्ति र गणतन्त्र स्थापनाको निम्ति मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले सम्पूर्ण राजनैतिक पार्टीहरूसित कुराकानी गर्नुपर्ने अनि यसो नगरेर केवल मोर्चाका नेताहरूसित मात्र कुराकानी गरेकोले जनता मुख्यमन्त्रीसित खुशी नरहेको बताइएको पनि प्रताप खातीले बताएका छन्‌। पहाडमा जुन आन्तरिक अशान्ति र अगणतान्त्रिक परिस्थिति छ, ममता व्यानर्जीले यसमा खुशी नरहेको बताउँदै 15 जूनमा मुख्यमन्त्रीसित भएका कुराहरूबारे बैठक गर्ने अनि बैठकमा लिइएका निर्णय 17 जुनको दिन लिगका नेताहरूलाई बताइने आश्वासन दिइएको पनि बताइएको छ।
हाइ पावर कमिटीले मोर्चालाई खुवायो लोप्पा
मोर्चाले मागेको 196, आशा गरेको 150 तर पायो5मौजा
कालेबुङ,9जून।
हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट सार्वजनिक हुने बित्तिकै मोर्चाले यो रिपोर्टलाई नमान्ने बताएको छ। यद्धपि मोर्चाले नै 24 मईमा कोलकातामा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसित भएको बैठकमा हाइपावर कमिटीले जस्तै रिपोर्ट दिए पनि मोर्चा र सरकार दुवैले मान्ने शर्तमा सम्झौता गरेको छ। रोशन गिरीले आज राष्ट्रिय संवादसूत्रलाई भने,5वटा मौजा गाभिएकोमा हामी सन्तुष्ट छैनौ।
हामीले 150 वटा मौजा आशा गरेका थियौ। अब हामी आन्दोलनको बाटोमा जानेछौ। यस बिषयमा पार्टीको सभामा छलफल हुनेछ। मोर्चाको माग थियो 396 वटा गोर्खाबाहुल मौजा। त्यसमा जोन बारलाले 40 वटा आदिवासी बाहुल क्षेत्र पनि जोडेका थिए। जीटीएमा डुवर्स पस्ने आशाले जोन बारलाले आदिवासी विकास परिषद् पनि छोडे। अहिले जोइन्ट एक्सन कमिटी खोलेर मोर्चाको जीटीएको आन्दोलनलाई दियोज्यानले सहयोग गरिरहेका छन्‌। तिनले पनि आज भने,5वटा मौजाले समस्या समाधान हुँदैन। श्यामल सेनको रिपोर्ट डुवर्सका मानिसहरुका निम्ति घातक भयो। तिनले मोर्चाले दाबी गरेको 196 वटा बाहेर आदिवासी बाहुल 40 वटा पनि जीटीएमा गाभ्ने आस्वासन आफ्ना आदिवासी जनतालाई दिइसकेका छन्‌। तर तिनी नराम्रो घतले धोकामा परे। जोन बारला पन्थीका एक नेताले भने, हामीले 18 जुलाईको सम्झौताको औचित्य बुझ्नुपर्ने थियो। यस्तो धोका होला भन्ने सोंचेका थिएनौं। अब डुवर्समा छुट्टै राज्यको आन्दोलन तीब्र बनाउनेछौं। यहॉंका गोर्खाहरूले पनि हामीलाई समर्थन गर्नेछन्‌। जोन बारलाले पनि भने, अब डुवर्सका पीडित जनतालाई लिएर छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्नेछौ। हामीले विकासको निम्ति मोर्चासित सम्झौता गरेका थियौं किन भने सरकार विकास चहान्छ भनेर भनिएको थियो। जीटीएलाई जीएण्डएटीए बनाएर विकास गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो तर सबै कुरामा धोका भयो। सरकारले पनि धोका दियो मोर्चाले पनि। सरकारले हामीलाई जीटीएबारे बुझाउन सभा गर्न समेत नदिएर सरकारले आफ्नै रबैया देखाइसकेको थियो। वास्तवमा सबै आदिवासी जीटीएमा पस्न चहान्थ्यो। हामीले हाइपावर कमिटीलाई यसबारे दर्खास्त पनि चढाएका थियौं। तर सरकारले विकासको कुरामा जनताको आकांक्षा रहेको बुझेन। अब यस्तो परिस्थिमा अब छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्नेछौं। तराई र डुवर्सका जीटीए विरोधीहरूको भने जित भयो। उनीहरूले जीटीएमा तराई र डुवर्सको अन्तरभुक्तिको कुराको विरोध गरिरहेका थिए। उनीहरूले श्यामल सेनको रिपोर्टलाई स्वागत जनाएका छन्‌ भने खुशी पनि मनाइरहेका छन्‌। जीटीएमा तराई र डुवर्सको अन्तरभुक्तिको विरोध गर्नेहरूले पटेकाहरू पनि पड्‌काए। यता आदिवासी विकास परिषद्का नेता बिर्सा तिर्कीले भने, श्यामल सेनको रिपोर्टलाई स्वागत गर्छौं। हामीले भनेको कुरा श्यामल सेनले मानिलिए। सरकारले पनि मानिलिए। जुन रिपोर्ट आयो सही रिपोर्ट हो। यसको कदर गर्नुपर्छ। मोर्चाले हाइपावर कमिटीको रिपोर्टलाई विरोध नगर्ने भनेर सरकारसित गरेको सम्झौताको कदर गर्नुपर्छ। तिनले अझ भने, 1950 को सन्धिको आधारमा हेर्नु हो भने एक ईञ्च जमिन पनि पाउनु हुने थिएन। सरकारले दया गर्‍यो। तिनले जोन बारलाबारे बोल्दै भने, जोन बारला आबिपका नेता होइनन्‌। तिनी दलाल हुन्‌। तिनी आबिपबाट निस्कासित नेता हुन। पहाडका जनता शान्ति चहान्छन्‌ कि अशान्ति आफै निर्णय गर्नुपर्ने बेला आयो। आविप नेता राजेश लाकडाले श्यामल सेनको रिपोर्टमा सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्‌। तिनले भने, यो रिपोर्टमा तराई र डुवर्सले खुसी मनाउनुपर्छ। माकपा नेता अशोक भट्टचायले पनि भने, हामी शान्ति चाहान्छौं। दार्जीलिङको समस्या समाधान हुनुपर्छ।
हाइपावर कमिटीको लो पावर रिपोर्टः शुरु भयो विरोध
हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स
अन्तमा हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स नै बन्यो तराई डुवर्सको अन्तरभुक्तिको कुरा। आज हाइपावर कमिटीले तयार पारेको लो पावर रिपोर्ट सार्वजनिक हुने वित्तिकै दार्जीलिङ अनि डुवर्समा सनसनी मच्चियो। 350 पृष्ठको रिपोटले जनाए अनुसार डुवर्सबाट केवल दुइवटा मौजा पस्यो सामसिङ र चिलाउने चियाबारी। तराईबाट दुइवटा ससानो बस्ती गोल्मा खाडी र पूर्व कराईबारी लगायत केही गोर्खाहरूको बाहुल्य रहेको एमएम तराई। मोर्चाले जीटीएको सम्झौतामा गोर्खाबाहुल र दार्जीलिङ जिल्ला संलग्न क्षेत्रका जम्मा 196 वटा मौजा मागेको थियो। त्यसमा पनि सम्झौता भए अनुसार 150 वटासम्मको मोर्चाको दाबी थियो तर मोर्चा कै चार सदस्य रहेको हाइपावर कमिटीले ससाना पॉंचवटा मौजा सिफारिस गरेर सरकारलाई बुझाएपछि रिपोर्ट आज सार्वजनिक भयो। रिपोर्ट सार्जनिक हुने बित्ति कै डुवर्समा सनसनी मच्चिएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले दिएको सफा धोकाले डुवर्सका जनता रिस्ले चुर भएको छ। मोर्चालाई भने रिपोर्ट सरकारको पक्षमा रहेको स्पष्ट थियो, त्यसै कारण दार्जीलिङमा डुवर्सका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर सम्झाउने कोशिष गरिएको थियो। तर धोका पाएको थाहा पाउँदा पाउँदै विमल गुरूङले डुवर्सका प्रतिनिधिहरूलाई सम्झाउन सक्ने कुरै थिएन। किन भने हाइपावर कमिटीका डुवर्सका प्रतिनिधिहरू पनि बैठकमा थिए अनि तिनले पनि हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट बनाउनुमा आफूहरूको कुनै योगदान नभएको स्पष्ट पारेका थिए। रिस्‌को झोंकमा डुवर्सका समर्थकहरूले विमल गुरूङलाई ठाडै धोकेबाज भनेका थिए। विमल गुरूङका अङ्गरक्षकहरूले डुवर्सका प्रतिनिधिहरूलाई धम्काउने कोशिष गरे पनि विमल गुरूङले नियन्त्रमा ल्याएपछि बैठक साम्य भएको थियो। आपत्तिजनक कुरा गरेर डुवर्सलाई धोका भइसकेको संकेत दिने मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले भने बैठक हुँदाहुँदै भागेका थिए। त्यसैबेला सल्किएको आगो डुवर्समा तीब्र बनाउने काम हाइपावर कमिटीको रिपोर्टले गरेको छ। सरकार र मोर्चालाई अघिबाट नै हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट थाहा रहेको अनि अशान्ति हुने देखेर नै हिजोदेखि नै डुवर्समा प्रशासनिक बल थुपार्ने काम शुरु भएको छ। सरकार जसले पनि विरोध गर्छ उसलाई पुलिस खन्याएर पनि शान्त पार्ने जुक्तिमा रहेको स्पष्ट भइसकेको छ भने आज मोर्चाले दुधको साक्षी बिरालोको व्यावहार देखाउन शुरु गरेको छ।
संलग्न क्षेत्रहरू पनि परेन
क्रामाकपा अनुसार मोर्चाले सीमाङ्‌कन नभइ जीटीएमा हस्ताक्षर गर्नुलाई ऐतिहासिक भूलकोरुपमा व्याख्या गरेको छ। गोर्खालिगले पनि विमल गुरूङलाई मदन तामङको काउन्टर नेता मान्दै डुवर्सलाई मात्र होइन सम्पूर्ण गोर्खाहरूलाई विमल गुरूङले धोका दिइसकेको बताइरहेको छ। यस्तोमा मोर्चाको बॉंच्ने ठाउँ भनेको हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट नै थियो। हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि विपक्षबाट कसरी बॉंच्नुपर्ने हो, यस सम्बन्धमा मोर्चाले गोप्य बैठक गरिसकेको छ। तर वास्तविकता छर्लङ्ग बनेपछि अहिले मोर्चाले आफू बॉंच्ने दुलो फेरि गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई नै बनाइरहेको छ। सम्झौता अनुसार 196 वटा मौजा जीटीएमा पर्नुपर्ने हो। यो पनि मोर्चाले गोर्खाबाहुल र संलग्न क्षेत्रको हिसाबमा पस्नुपर्ने बताएको थियो। तर हाइपावर कमिटीको रिपोर्टले पॉंचवटा मौजामा मात्र गोर्खाबाहुल देखेको छ। त्यसमा सिलगढीको दुइवटा ससाना बस्तीहरू परेको छ। सेभोक 10 माइलका क्षेत्रहरू,(जो छैटौं अनुसूचीमा परेको थियो) तमक डागी, लाल्टुङ फरेस्ट, वेतगेडाका वरिपरिका क्षेत्रहरू, सालुगढाका क्षेत्रहरू, सालबारी, चम्पासरीका गोर्खाबाहुल क्षेत्रहरु, बाघडुग्राका गोर्खाबाहुल क्षेत्रहरूबाहेक डुवर्सका पथ्थरझोडा, डामडिम, महाबारी बीरपाडा तथा यस्ता संलग्न अनि गोर्खा बाहुल क्षेत्रहरू कुनै पनि जीटीएमा नपस्ने भयो।
हाइपावर कमिटीले स्थलगत निरीक्षण नै गरेन
हाइपावर कमिटीलाई मोर्चाले मागेको गोर्खाबाहुल क्षेत्रहरूको वास्तविकता बुझ्न र केलाउनको निम्ति स्थलगत निरीक्षण गर्ने भएको थियो। तर दार्जीलिङका जिल्ला अधिकारीले एकदिन निरीक्षण गरेपछि जलपाइगुढीका जिल्लाधिकारीले निरीक्षण नै नगरेको समाचार प्राप्त भएको छ। श्यामल सेनले रिपोर्ट बनाउन के के काम गरिरहेका छन्‌, डुवर्स र पहाडका कमिटीका सदस्यहरूलाई हिजोसम्म नै केही थाहा थिएन। एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, मोर्चा र सरकारबीच भएको सम्झौताले नै हाइपावर कमिटीको हात बॉंधेको छ। जीटीएको सम्झौतापछि हाइपावर कमिटी गठन गर्नु नै तराई र डुवर्स नपस्नुको संकेत थियो। मोर्चाले नै आविपसित सम्झौता गरेर सरकारलाई बिच्काउने काम गर्‍यो। जीटीएको सम्झौता गरेर आविपसित सम्झौता गर्नु केवल नाटकबाजी मात्र थियो। तिनले भने अनुसार रिपोर्ट प्रकाशित भइसक्दा पनि सदस्यहरूलाई रिपोर्टबारे बताइएन। यसकारण हाइपावर कमिटी श्यामल सेन कमिटी मात्र थियो। यसमा सरकारले नै जालझेल गरेको छ अनि यो कुरा मोर्चाका केही शीर्षस्थ नेताहरूलाई राम्रैगरी थाहा छ।
फेरि आन्दोलनको नाटक
हाइपावर कमिटीको रिपोर्टपछि मोर्चाका रोशन गिरी अनि डुवर्सका जोन बारलाले छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गर्ने बताएका छन्‌। जोन बारलाको छुट्टै राज्यको आन्दोलन दार्जीलिङसित तराई र डुवर्सको सम्बन्ध विच्छेद गर्ने जुक्ति मात्र रहेको जानकारहरूको भनाइ छ। जोन बारलाको छुट्टै राज्यको आन्दोलनको अवधारणा दार्जीलिङमा भएको मोर्चाको केन्द्रिय कमिटीको बैठकबाट नै उपार्जन भएको समाचार प्राप्त छ। हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट अघिबाट नै थाहा पाएकोले अनि डुवर्सका जनताले धोका पाएको स्पष्ट भएकोले डुवर्सको स्थिति र जनताको आक्रोषलाई नियन्त्रित गर्न मात्र जोन बारलाले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्ने कुरा गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्‌। यता रोशन गिरीले गर्छु भनेको आन्दोलन छुट्टै राज्यको हो कि जीटीएको कुनै स्पष्ट नभएकोले मोर्चाले आफ्नो कर्तुतबाट बॉंच्न फेरि आन्दोलनको ओत लागिरहेको विपक्षको भनाइ छ।
जीटीए सम्झौता ऐतिहासिक भूल रहेको क्रामाकपाको दाबी
मोर्चाले जीटीए खारेज गरेर छुट्टैराज्यको आन्दोलन गरे स्वागत-तारामणि राई
राजनैतिकरुपले मोर्चाको चुकुल खुस्किएपछि मोर्चाले दुनो सोझ्याउने अनि जनतालाई भ्र्रममा राखेर जीटीए चुनाउको मैदान खुल्ला गर्ने शंका क्रामाकपाले गरेको छ। यसै पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको मुद्दा देखाएर नगरपालिका अनि विधानसभा चुनाउ जितिसकेको छ। अब फेरि हाइपावर कमिटीको रिपोर्टलाई खराब देखाएर मोर्चाले गर्छु भनेको आन्दोलन जीटीएको चुनाउको निम्ति गरेको अर्को कुटनीति हुनसक्ने शंका पनि क्रामाकपाले गरेको छ। मोर्चाले फेरि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपछि क्रामाकपा महासचिव तारामणि राईले मोर्चालाई सोधेका छन्‌, आन्दोलन जीटीएको हो कि गोर्खाल्याण्डको? छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति गर्छ भने क्रामाकपाले स्वागत गर्छ किन भने आन्दोलन केवल एउटा पार्टीले मात्र गरेर हुँदैन, सबै मिलेर गर्नुपर्छ। तर मोर्चाले आन्दोलन गर्न अघि जीटीए खारेज गर्नुपर्छ। जीटीए खारेज नगरी गरेको आन्दोलन कुटनीति मात्र हो। तारामणि राईले जनता र सचेतहरूलाई सतर्क गराउँदै भने, सबैले छातीमा हात राखेर सोंच्नुहोस्‌, मोर्चाले गर्छु भनेको आन्दोलन छुट्टैराज्यको हो भने जीटीएलाई खारेज गर्नुपर्छ कि पर्दैन। जीटीए खारेज गरेन भने बुझ्नुपर्छ मोर्चाको आन्दोलन जीटीएमा वकबर जित्ने कुत्सित प्रयास मात्र हो। तिनले अझ भने, आन्दोलन बार्गे्रेनिङ त होइन? सरकारलाई छुट्टैराज्यको डर देखाएर जीटीएमा अझ दुइतीन मौजा थप्ने र जीटीएको चुनाउ गर्ने षडयन्त्र होइन? आधा कुरा बोलेर मात्र हुँदैन किन भने मोर्चाले विश्वास गुमाइसकेको छ। समष्टि बॉंडीसकेको छ। प्रतिनिधि छानिसकेको छ। यस्तोमा आन्दोलन गर्छु भन्नु स्पष्टरुपमा नाटकबाजी मात्र हो। तिनले आफ्नो सवाललाई दह्रो गर्दै भने अनुसार मोर्चाले सरकारसित 24 मईको दिन हाइपावर कमिटीले जस्तो रिपोर्ट दिए पनि मान्ने शर्तमा सम्झौता गरिसकेको छ। अहिले आएर हाइपावर कमिटीको कुरा मान्दैनौं भन्नु नाटक मात्र हुन्छ, उनीहरूको सम्झौतालाई कदर गर्नु परेमा। यसकारण जीटीएको चुनाउ गर्न सरकारलाई चापदिने खेल मात्र मोर्चाले गर्नसक्छ। अर्को विकल्प मोर्चासित छैन। जोन बारलालाई डुवर्समा पनि छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्न लगाएर पहाडमा जीटीएको चुनाउ गर्न नै नाटक भइरहेको छ। यसैकारण नै हाइपावर कमिटीले मोर्चाको कुटनीतिलाई कदर गर्दै पॉंचवटा मौजा दिएको छ। मोर्चाले जे मागेको छ, त्यही दिएको छ। किन भने मोर्चाले नै जीटीएमा सम्झौता गर्‍यो। सम्झौतापछि जोन बारलासित सम्झौता गर्‍यो। जीटीएलाई राष्ट्रपतिको अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर पनि आन्दोलन गर्‍यो। के हतार थियो र मोर्चाले यस्ता भूलहरू गर्दै आइरहेको छ। राईले भने, वास्तवमा जीटीएमा सम्झौता हुनु नै ऐतिहासिक भूल हो। कुनै कुरा नै नमिलि सम्झौता गर्नु भनेकोे मोर्चाको दाबी नै आजको पॉंचवटा मौजा र जीटीए हो। तिनले ध्यानाकर्षण गर्नै बताए अनुसार शुरुमा मोर्चाले 196 वटा मौजाको कुरा गरेको छ। तर आशा राखेको छ 150 मौजा। माग्ने 196 अनि आशा गर्ने 150? तर पायो5मौजा। हाइपावर कमिटीले सार्वजनिक गरेको5मौजा पनि सरकार र मोर्चाको मिलिभगत कुटनीति हुनसक्छ। किन भने5मौजाको नाम आउने वित्तिकै मोर्चाले आन्दोलन गर्ने भएको छ। हाइपावर कमिटीको रिपोर्टलाई नमान्ने भएको छ जब की हाइपावर कमिटीको रिपोर्टको विरोध सरकार र मोर्चा दुवैले गर्न नसक्ने सम्झौता पनि मोर्चाले नै गरेको छ। यस्तोमा आन्दोलन गर्छु भन्नु केही मौजा हुल्नको निम्ति गरिएको बार्गेनिङ हुनसक्छ। तिनले बताए अनुसार क्रामाकपाको 1 मई अनि 27 मईको कार्यक्रमले जनतामा जुन विश्वास पैदा गरेको छ अनि क्रामाकपाले पहाडमा जुन समर्थन पाइरहेको छ, यसैलाई देखाएर सरकारले मोर्चालाई जतिसक्दो सबै अगणतान्त्रिक कार्य गर्न दिनसक्छ। तिनले भने, अहिले मोर्चाले हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट वा श्यामल सेनको रिपोर्टलाई वायस रहेको बताइरहेको छ अनि आन्दोलन गर्ने भनिरहेको छ। कतै यो जीटीएको चुनाउलाई वायस गर्ने खेल त होइन?तिनले मोर्चाले गर्छु भनिरहेको आन्दोलन डुवर्सको अस्थिरताबाट बॉंच्ने उपाय हुनसक्ने पनि बताएका छन्‌।
मोर्चाको नौटङ्‌कीबाट होसियार बस्ने लिगको आह्वान
ढिलोछिटो मोर्चा नेताहरू जेल जानेछन्‌-खाती
हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट अनि मोर्चाको आन्दोलनलाई गोर्खालिगले नौटङ्‌कीको संज्ञा दिएको छ। गोर्खालिग महासचिव प्रताप खातीले सोझै भने, जीटीए मदन तामङको हत्याराहरूले जेल जाने डरले नै थापेका हुन्‌। आजको स्थितिबारे मदन तामङले पहिल्यै बताइदिएका हुन्‌। मदन तामङले भनेकै थिए विमल गुरूङ, रोशन गिरी अनि हर्कबहादुर छेत्रीले गोर्खाल्याण्डको घोडामा दागोपाप ताक्दैछ भनेर। दागोपापमा नै कुरा मिलाएकोले नै मौजाहरू नपसेको हो।
तर जनताले चाल पाउने डरले मोर्चाले अनेकौं नौटङ्‌की गर्‍यो। धोका पाउनेहरूले विमल गुरूङलाई डुवर्समा बोलाएर सोध्नुपर्छ। तिनले तराई र डुवर्सका जनतालाई हतास नहुने आह्वान गर्दै भने, मोर्चाका नेताहरूको पछि डुवर्सका जनता लाग्नु हुँदैन किन भने उनीहरूको ठाउँ दागोपाप, जीटीए वा नगरपालिका कँही छैन। उनीहरू बस्ने ठाउँ जेल हो। ढिलो छिटोको कुरा मात्र हो। मोर्चाका नेताहरू जेल जानैपर्छ। उनीहरूलाई मदन तामङको हत्या फॉंसीको फन्दा बनेको छ। यो फन्दाबाट उनीहरूले अनेकौं नौटङ्‌की देखाए पनि बॉंच्ने छैनन्‌। यसकारण यस्ता हत्याराहरूकोपछि जनता लागेमा जनताले धोका त पाउनेनै छ, आफ्नो आमालाई पनि बेचिपठाउनेछ। तिनले आजको स्थिति हुनुमा सुनको औंठी र पैसामा बिक्रि हुने विकुवा नेताहरू दायी रहेको बताएका छन्‌। तिनले स्पष्ट पारे मोर्चा इमान्दार हुनु हो भने जीटीएमा सम्झौता नै गर्ने थिएन तर मोर्चाका नेताहरूले मदन तामङको हत्या गरेपछि जीटीएमा हस्ताक्षर गर्‍यो। मोर्चाका नेताहरूलाई मदन तामङको हत्या गरेको इनाममा नै ममता सरकारले जीटीए दिएको हो। मोर्चाले आन्दोलन नै गरोस्‌, मान्छे मार्ने मात्र हो। पाउनेवाला केही छैन। तिनले विमल गुरूङले 10 मार्च 2010 मा गोर्खाल्याण्ड ल्याउने बचन दिएर जनतालाई आशा देखाएर पार्टीमा मान्छे ताने। मोर्चाका नेता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले भनेकै छन्‌ कि बाटो, विकास भनेको भए जनता मोर्चामा आउने थिएनन्‌। यसैकारण नै मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड भनेर पार्टीमा जनता तानेका हुन्‌। निर्दोष जनताको भावनासित मोर्चाले खेल्नुसम्म खेलिसकेको छ। जनताले कुरा नबुझेे अझ धेरै कष्ट भोग्नुपर्छ। खातीले विमल गुरूङलाई सोझै मिरजाफरको पनि संज्ञा दिए। तिनले भने, विमल गुरूङ गोर्खाहरूको विरोधी हुन्‌। तिनले अहिले केवल डुवर्सलाई मात्र धोका दिएका होइनन्‌, सम्पूर्ण गोर्खालाई धोका दिएका हुन्‌। तिनी मिडास हुन्‌। आफ्नै मान्छेलाई धोका दिइरहेका छन्‌। यतिसबै हुँदा पनि तिनी पैसा कै पछि लागिरहेका छन्‌।
जीटीएको चौकीमा नबसी मुख्यमन्त्रीभन्दा पनि ठूलो भएर सरकारी राशिन बॉंड्‌छन्‌। तिनलै यतिविघ्न पैसा कहॉंबाट पाइरहेका छन्‌ र धमाधम विकास गरिरहेका छन्‌। के त्यो विकास सरकारी योजना होइन? जसबाट विमल गुरूङले फाइदा लिइरहेका छन्‌। जनता जाग्नुपर्छ। मदन तामङले कहिल्यै कुरा फेरेनन्‌, बरु जनताको निम्ति घिच्रो दिए। मोर्चाका नेताहरूले के दिए मुद्दाको निम्ति? दिए भने धोका, धोका र धोका नै दिए। कुनै कार्यक्रम छुट्टै राज्यको निम्ति गरेन। सम्पूर्ण पहाड र जनताको समर्थन हुँदा दागोपाप धरी ल्याउन नसक्नेले गोर्खाल्याण्ड ल्याउँछ भनेर जनताले सोंच्नु हुँदैन। माया त्यसलाई गर्नुपर्छ जो जातिप्रति इमान्दार छ। जनता जागेन भने अझ धोका पाउनेछन्‌।